Sida looga saaro PIN-ka iPhone, baro sida loo beddelo lambarka | Wararka IPhone
Sida looga saaro PIN-ka iPhone
Mararka qaarkood waxaan u baahanahay caawimaad si aan u qabanno hawlo qaarkood oo umuuqda waxoogaa fudud. Oo waxaa laga yaabaa inay soo noqoto in shaqada beddelka lambarka sirta ah ee SIM-ga iPhone-ka laga yaabo inuu waxoogaa ka qarsoon yahay sida aan jeclaan lahayn, in ka badan wax kasta maxaa yeelay waxa ka mid ah tallaabooyinka amniga ee aadka u badan ee ay Apple ku bixiso sida caadiga ah ee ku jirta iPhone-keeda, wax ka beddela SIM PIN wuxuu umuuqan karaa kan ugu yar. Si kastaba ha noqotee, si aad wax uga beddeli karto sidaad u jeceshahay, Actualidad iPhone-ka waxaan kuugu keenay cashar si aad u badali karto PIN-kan ama xitaa aad u joojiso haddii aad rabto.
Beddelka PIN-ka kaarka SIM-ka ayaa umuuqda mid aan muhiim ahayn maanta, mahadnaqa amniga ee Find My iPhone ayaa na siiya kaas oo aan ka baari karno oo ka horjoogsan karno iPhone-keena khasaaraha suurtagalka ah, iyo iyadoo la tixgelinayo in xiriirka leh aqoonsigeenna Apple uu beddelayo taleefanka ayaa noqonaya mid aan la isticmaali karin marka la isku dayayo in dib loo soo celiyo. Si kastaba ha noqotee, talaabooyin kasta oo amni oo aan ku dari karno si shaqada tuugada looga dhigo mid adag sida ugu macquulsan ayaa lagula talinayaa.Taasi waa sababta maanta aan u sharaxeyno sida wax looga beddelo nambarka PIN ee kaarkaaga SIM.
Marka ugu horeysa waa inaan galno arjiga «Settings», marka aan halkaa tagno waxaan dhex mari doonnaa liiska illaa qaybta «Telefoonka». Waxaan geli doonnaa submenu-taleefoonka illaa dhamaadka liiska si aan u gaarno xulashooyinka SIM, halkaasoo aan ku arki doonno "SIM PIN" iyo "Codsiyada SIM". Hadda waxaan si fudud u gelineynaa PIN PIN-ka waxaanan geli karnaa labada ikhtiyaar ee aan dooneyno, dhaqaajineyno ama joojineyno PIN-kaas, ama dhanka kale iska beddel SIM PIN haddii aan doono.
Saddexdaan talaabo ee fudud waxaan horeyba ugu guuleysanay inaan galno xulashada SIM-ka. Anigu shaqsiyan waxaan u leeyahay naafo, in ka badan wax kasta maxaa yeelay taleefannadan ayaa si dhif ah loo damiyey maanta, oo sidaas ayaan ahay waqti ka waqti ayaan marar badan illoobaa SIM kaarka PIN. Si kastaba ha noqotee, sidaan horay u sheegnay, tallaabo kasta oo nabadgelyo ayaa yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida looga saaro PIN-ka iPhone
Ma filler baa?
Mise waa inay ku bixiyaan daabacaad kasta?
Ku jawaab ktre
hahaha waxaan moodayay isla xD
Way fiicantahay in la arko in adduunka wali ay jiraan dad wax walba og, sida Ktre iyo Sebastián oo u maleynaya in qof kasta oo kale inuu wax walba ogaado sidoo kale ... aan aragno haddii ay diyaarin karaan gole heer khabiir ah naftooda.
Habeen wanaagsan Cajiib.
Waxaa jira furaha, boggan waxaa loogu talagalay qof walba, khabiiro iyo khubaro yar. Ma ogid inta lebis cusub uu qadarinayo talooyinka qaarkood oo umuuqda kuwa fudud oo mararka qaar isku murugsan.
Tony Michel Caubet dijo
iyo hadaanan sim isticmaalin? sideen uga saaraa lambarka aad haysato (oo aad wax ka ogtahay)?
Jawaab Toni Michel Caubet
TaiG ayaa cusbooneysiin doonta Jailbreak maanta si Cydia Substrate ay ula jaan qaado
Xaaladda hadda ee Cydia Substrate ee macruufka 8.3